သွားနဲ့ခံတွင်းအတွက် စားပေးသင့်တဲ့ အသီးအနှံတွေ - Hello Sayarwon
ကျန်းမာစေဖို့ အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းက ကြိုတင် ကာကွယ်တာပါ။ အခုတစ်ခေါက်တော့ အပြုံးတွေ လှပစေဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ သွားနဲ့ခံတွင်း ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ် အသီးအနှံတွေ ကို စားသုံးရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
သွားနဲ့ခံတွင်း ကျန်းမာရေးက ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံး ကျန်းမာဖို့အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါပါတယ်။ ဒီလိုပြောရတာက ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး ကျန်းမာစေဖို့ အရေးပါတဲ့ အာဟာရကို စားသုံးချေဖျက်ဖို့ တာဝန်ကို သွားနဲ့ခံတွင်းက တာဝန်ယူထားလို့ပါပဲ။ ဒီတော့ ကျန်းမာတဲ့ သွားနဲ့ခံတွင်းကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် စားပေးသင့်တဲ့ အသီးအနှံတွေ က ဘာတွေများလဲ…… အတူတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်လား………….
လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးတွေနဲ့ အသီးအရွက်တွေက သွားနဲ့ခံတွင်း ကျန်းမာစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ သွားတွေ၊ သွားဖုံးနဲ့ လျှာ ကျန်းမာစေဖို့ ဒီ အသီးအနှံလေးတွေ ကို စားပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ပန်းသီးနဲ့ အချဉ်ဓာတ်ပါတဲ့ အသီးအနှံတွေ
တစ်နေ့ကို ပန်းသီး တစ်လုံး ပုံမှန် စားပေးတာက ကျန်းမာစေတယ်ဆိုတဲ့ စကားထဲမှာ သွားတွေအတွက်လည်း ပါပါတယ်။ ပန်းသီး ပုံမှန် စားနေသလို သွားနဲ့ ခံတွင်းကို ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ဖို့လည်း လိုပါမယ်။ ပန်းသီးဆိုတဲ့နေရာမှာ လတ်ဆတ်တဲ့ ပန်းသီး ဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါမယ်။ ပန်းသီး ဖျော်ရည်၊ ပန်းသီးခြောက်တွေ မဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါမယ်။
ပန်းသီးကို ဝါးလိုက်တဲ့အခါ ပန်းသီးရဲ့ အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝမှုက သွားဖုံးတွေကို ကျန်းမာစေဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ခံတွင်းထဲမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေ မပေါက်ဖွားစေဖို့လည်း ဟန့်တားပေးပါ။
သွားနဲ့ခံတွင်း ကျန်းမာစေဖို့ ပန်းသီး အပြင် ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝတဲ့ သစ်တော်သီး၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ လိမ္မော်သီး၊ နာနတ်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွားသီး စတာတွေကို စားပေးလို့ ရပါတယ်။
မုန်လာဥနီ၊ တရုတ်နံနံတို့လိုမျိုး အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးအနှံတွေက တံထွေးထွက်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး သွားနဲ့ ခံတွင်း ကျန်းမာစေဖို့ အထိရောက်ဆုံး ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
မုန်လာဥနီ နဲ့ တရုတ်နံနံတို့မှာ ဗီတာမင် A ပါဝင်တာကြောင့် သွားတွေကို ကြံ့ခိုင်စေဖို့ အထိရောက်ဆုံး ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆလတ်ရွက်၊ ကိုက်လန်၊ ဟင်းနုနွယ်၊ ကညွတ်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်တို့လိုမျိုး အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ ဗီတာမင် A၊ ဗီတာမင် C၊ ဘီတာကယ်လ်ရိုတင်း၊ ဖော့စဖရိတ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်တွေ ပါဝင်နေတာကြောင့် သွားတွေကို အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးနိုင်မှာပါ။
ခရင်မ်ဘယ်ရီသီး၊ ဘလူးဘယ်ရီသီး၊ ရက်စ်ဘယ်ရီသီးတို့က သွားချေးတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသလို ခံတွင်းထဲမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေ မဖြစ်ပေါ်စေဖို့ ဟန့်တားပေးပါတယ်။ သွားပိုးမစားအောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကဲ……. သွားတွေကြံ့ခိုင်ပြီး ကျန်းမာတဲ့ ခံတွင်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ အခုပြောပြခဲ့တဲ့ အသီးအနှံလေးတွေကို စားသုံးပေးဖို့ လိုမယ်နော်။
Best Foods for Your Teeth: Fruits and Vegetables Edition https://www.deltadentalia.com/a-healthy-life/healthy-living/best-fruits-and-vegetables-for-our-teeth/ Accessed Date 11 August 2021
Eat Fruits and Veggies For A Healthy Smile https://dentistry.uic.edu/news-stories/eat-fruits-and-veggies-for-a-healthy-smile/ Accessed Date 11 August 2021